TPLF oo sheegtay in ay been tahay ka bixitaanka Mekelle dawlada itoobiya
Home WARARKA TPLF oo sheegtay in ay been tahay ka bixitaanka Mekelle dawlada itoobiya
Itoobiya-(Berberanewa)- Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in ciidamadiisa dalkiisa ay ka baxeen magaalada Mekelle ee xarunta u ah gobolka Tigree ee ay dagaalladu ka socdaan, maxaa yeelay hadda wixii ka dambeeya ma ahaan doonto “xarun lagu soo jiido khilaafaadka” – waa hadal ay diideen xoogagga Tigreega ee dib ula wareegay magaalada. “Inay gebi ahaanba been tahay”.
Dhacdooyinka ugu waawayn ee dhacdooyinka ku saabsan kudhowaad sideed bilood ee colaada, Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray (TPLF) waxay sheegtay inay si buuxda gacanta ugu hayso magaalada Mekelle salaasadii, kaliya hal usbuuc kadib markii ay bilaabeen dagaal ka dhan ah ciidamada federaalka Itoobiya.
xulafadooda, oo ay ku jiraan ciidammo ka socda deriska Eritrea iyo dagaalyahanno ka socda gobolka Itoobiya ee Amxaaro, oo xuduud la leh Tigray.
Waxay timid maalin uun kadib markay dawlada Ethiopia ee Adis Ababa ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah, oo ay TPLF ku tilmaamtay “kaftan”.
Dadka ku nool Mekelle, halkaasoo isgaadhsiintu hawada ka maqneyd maalintii Arbacada, waxay mar sii horreysay sheegeen in dagaalyahannada Tigreega ah ee soo socda lagu soo dhoweeyay si farxad leh.
Waxaa jiray muuqaallo lamid ah kuwii ka dhacay waqooyiga magaalada Shire maalintii Arbacada, halkaas oo ay ka baxeen ciidamada Eriteriya isla markaana ay galeen ciidamada Tigreega, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Abiy ayaa xaqiijiyay ka bixitaanka Mekelle, maaddaama sarkaal dowladda ka tirsan uu intaas ku daray in ciidammada ay ku soo laaban karaan toddobaadyo gudahood haddii loo baahdo.
“Markii aan soo galnay Mekelle toddobo ama sideed bilood ka hor, waxay ahayd sababta oo ah waxay ahayd xudunta cufnaanta khilaafaadka,” ayuu ra’iisul wasaaraha u sheegay warbaahinta dowladda salaasasii, fiidiyow kaas oo la soo geliyay degelkiisa Arbacadii.
Waxay xarun u ahayd dowlad. Xarun loogu talagalay kheyraadka la yaqaan iyo kuwa aan la aqoon. Laakiin marka aan ka baxno, wax gaar ah oo ku saabsan ma jiraan marka laga reebo inay jiraan ilaa 80,000 oo qof iyo kuwa bililiqeysta dadka… Waxay lumisay xaruntii culeyska iyo xaaladda hadda jirta.”
Previous articleMaayarka cusub ee Hargeysa oo xilka la wareegay
Next articleIs-haynta Asxaabta siyaasaddu yaanay qaranka hadimo u keenin